Location: musha » Kutumira » Wtn » Sachigaro Dr. Walter Mzembi ndivo Tariro Itsva yeAfrican Tourism
Dr. Walter Mzembi, sachigaro WTN Africa
World Tourism Network ndiro sangano riri seri kwenhaurirano irikuitwa rebuilding.travel nevanobata zvekushanya munyika zana nemakumi maviri nesere.
Africa yaigaroita basa rakakosha munhaurirano idzi.
Nhasi World Tourism Network yakazivisa WTN Africa, chitsauko chitsva chakakosha chine chinangwa chimwe chete- kusimudza mabara eAfrican Tourism muNyika.
Vana vevatangi veAfrican Tourism Board ndivo vakavambawo nhengo dzeWorld Tourism Network. Inotsanangura chisungo chakakosha pakati peAfrican Tourism Board neWorld Tourism Network.
World Tourism Network inoitirwa bhizinesi
African Tourism Board yakatanga Project Tariro yekubatsira pasi rose mukukunda dambudziko reCOVID-19. Nguva yehope dzaMzembi inosanganisira vatungamiri vakawanda vari kuita chirongwa cheProject Hope.
Vavambi vana ava vanosanganisira Juergen Steinmetz, Dr. Peter Tarlow, Alain St.Ange, uye Dr.Taleb Rifai
World Tourism Network Africa, iyo African Tourism Bhodhi, Uye African Tourism Marketing Corporation mubatanidzwa mutsva unohwina uye unokwanisa kuunza nhaurirano yekuvakazve muchiitiko cheAfrican Travel and Tourism Indasitiri.
Naizvozvo chiziviso chaitwa nhasi nemutungamiri weWTN Dr. Peter Tarlow chakakosha.
Iyo WTN Executive uye Nhengo inofara kuzivisa kutanga kweWTN Africa, iyo ichakwikwidza Brand Africa, Africa Diaspora, uye zvimwe zvinofarirwa neAfrica mukati mesangano nepasirese.
Vaimbove gurukota rezvekushanyirwa kwenyika kwenguva refu kuRepublic of Zimbabwe uye Gurukota rinoona nezvekunze kusvika Mbudzi 2017 vabvuma nemufaro kutungamira Chikamu ichi semutungamiri wedunhu rekutanga.
WTN ichazivisa nekufamba kwenguva mamwe MaPresident eDunhu acharwira zvido zveEurope, America, Asia, neOceania. Pasina kupokana pasi pehutungamiriri hwaDr. Mzembi, Mumiriri weAfrica Union pachinzvimbo chesarudzo cheSecretary-General weUNWTO muna 2017, Africa ichave pachinzvimbo chekugadzirisa kushanya kwakatarisana nedambudziko riripo reCOVID 19.
Dambudziko iri rakadzora budiriro yechikamu ichi uye kukura kwayo kwakakura nhaka yemakore gumi panguva yaaive Minister of Tourism uye akashanda zvine mutsindo nevaimbove Gurukota reSeychelles Alain St Ange, Gurukota reKenya Najib Balala, Minister Bartlet wekuJamaica. uye zvechokwadi aimbove Secretary-General Taleb Rifai pakati pevamwe vane mukurumbira vakapa.
Makorokoto kuvanhu veAfrica uye kuna Dr. Walter Mzembi vane hunyanzvi hwekuita zvematongerwo enyika huchadikanwa sezvo nyika yakavharwa yakavhurika kune nzendo nekushanya.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro WTN Africa tinya apa
Africa muchiso koparesheni Covid Covid-19 Jamaika Marketing Peter Tarlow Secheres Taleb Rifai ushanyi Wtn zimbabwe
Dhipatimendi reUS State ikozvino rinogadzirira Embassy yeUS muUkraine kuRussia Invasion
Hassan Shuaibu Chiroma anoti:
Ndira 24, 2022 pa08: 36
Ndiyo budiriro huru yekushanya kweAfrica. Kudos kune kuedza kwako pakubudirira kukuru uku. Ndinokutendai mose.
Pane here sarudzo dzenhengo dzevadzidzi vesangano idzva iri, ndapota?